माओवादी सांसदले घु’र्की लगाएपछि फकाउन कांग्रेसलाई हम्मे हम्मे – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाजमाओवादी सांसदले घु’र्की लगाएपछि फकाउन कांग्रेसलाई हम्मे हम्मे
माओवादी सांसदले घु’र्की लगाएपछि फकाउन कांग्रेसलाई हम्मे हम्मे
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा मंगलबार उखु किसानको स’मस्याबारे सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल थियो । छलफलमा सभापति भरतकुमार शाहले उत्तर प्रदेशको मोडल प्रस्तुत गरेर दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराई, राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर र कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले सहमति जनाउँदै समितिबाट भएका निर्देशन कार्यान्वयनमा गइरहेको र केही भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सुनाए । उखु किसानको स’मस्या समाधानका लागि आफ्नो मन्त्रालय जुनसुकै निर्णय गर्न तयार रहेको बताए ।
तर सधै प्रतिबद्धता आउने र समाधान नभएको देखेका सांसदहरु भने रन्किए ।नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले आमरण अनसन बसेर घुँडा टेकाउनेसम्मको अभिव्यक्ति दिए । त्यसपछि माओवादीकै सांसद धर्मशीला चापागाईं १५ असोज २०७५ अर्थात तीन वर्ष अघि दिइएका निर्देशन अझै कार्यान्वयन नभएको, समस्या ज्युँका त्युँ रहेको भन्दै क’ड्किएकी थिइन् ।
सचिवहरूको जवाफ चित्तो बुझ्दो नभएको भन्दै यो विषयमा छलफल गर्न उनले कांग्रेस नेतासमेत रहेका सभापति शाहको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।धर्मशीला क’ड्किँदा माओवादीकै मोदीले चाहिँ चे’तावनी दिए । ‘आगामी ६ महिनामा नीति बन्दै गर्छ, अहिले राज्यले नै ८/१० करोड वक्यौता देओस् ।
पछि उद्योगबाट असुल्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले किसानको समस्या सुनेन, बाँकी भुक्तानी तत्काल दिएन भने माइतीघर मण्डलामा गएर आमरण अनसन बस्छु । किसानसँगै अनसन बसेर घुँडा टेकाउँछौं ।’मोदीको चेतावनीपछि बोलेकी कांग्रेस सांसद पार्वती डिसी चौधरीले माहोल शान्त पार्न खोजिन ।
उनले आफ्नै सरकार भएको बेला अनसन बस्ने कुरा नगर्न अनुरोध गरिन । ‘माननीयज्यूले अनसन बस्ने कुरा नगर्नुस् । आफ्नै सरकार छ । समस्या स’माधानका लागि सरकारलाई भन्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।उनी त्यतिमै रोकिइनन्, स’मस्या स’मस्या स’माधान नहुनुमा कसको कमजोरी हो भनेर प्रश्न गर्न थालिन ।
‘मन्त्रीहरु पनि हामीजस्तै मा’ननीय भएरै गएको छ । किन रोकिइरहेको छ । मन्त्रीलाई सचिवले न’टेरेको हो कि सचिवले मन्त्रीलाई बुझाउन नसकेको हो ? हाम्रो सरकार छ, किन स’माधान हुन सकिरहेको छैन ? यसमा मन्त्रीहरू पनि ग’म्भीर हुनुपर्छ ।
सरकारले तुरून्त स’माधान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।कांग्रेसबाट सभापति रहेका शाहले पनि माहोल शान्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । सांसद धर्मशीला वाणिज्य सचिव भट्टराईमाथि क’ड्किँदा शाहले उहाँ(सचिव)ले सबै कुरा कहाँ भन्न सक्नुहुन्छ, मन्त्री नै बोलाउला भनेर भनेका थिए ।
माओवादी सांसदहरुले चर्को प्रश्न गर्दा सचिव भट्टराई छलफल नसकिँदै सभापति शाहसँग विदा मागेर हिँडेका थिए । छलफलमा माओवादी सांसदहरुले सरकारका सचिवबाट सन्तुष्ट हुनेगरी जवाफ नै नपाएको गु’नासो गरेका थिए ।